Ogaden News Agency (ONA) – Istraatiijiyadii Wayaanaha ee ahayd Dagaalama ama Yaaca Maxaa uga Hirgalay? -Noora Afgaab
Istraatiijiyadii Wayaanaha ee ahayd Dagaalama ama Yaaca Maxaa uga Hirgalay? -Noora Afgaab
Wayaanaha (TPLF) waxay Itobiya qabsadeen ama loo dhiibay markii dagaal sokeeye oon waxba la’isula hadhin qabiilna ku salaysan uu hadheeyey dalka Somaliya, Qaranimadii Somaliyana ay burburtay.
Waxaan kusoo sheegnay maqaaladii hore inay qaxooti xad dhaaf ah soo galeen Ogadenya 1991kii, kuwaasoo isugu jiray muwaadiniin horey uga guuray ama qaxay dalka Ogadenya iyo qaar Jamhuuriyadii Somaliya kasoo qaxay, waxyna dhamaantood soo magangaleen shacabka Ogadenya iyagoo laga soo dhacay waxay guryo iyo xoolo lahaayeen. Sidaa daraadeed, Ihaadhig-tii (Wayaanaha) xukunka Itobiya gacanta ku dhigay iyagoo ku xisaabtamaya arimaahaasoo idil ayay dagaal ku soo qaadeen jabhadihii Itixaadka iyo ONLF. Waxay filayeen marka duruufaha Somaliya la eego inuu dagaalka Ogadenya aad uga sahlanaan doono dagaaladay lasoo galeen ciidankii Mengisto ee Amxaarada ay hogaanka u ahayeen iyo midkay ku qaadeen maleesiyaadkii Oromada ee OLF.
Sidaan soo tilmaanay, dagaalka ay ka bilaabeen Ogadenya qorshihiisa wuu ka duwanaa dagaaladay lasoo galeen Amxaarada iyo Oromada. Dagaaladey la galeen Amxaarada iyo midkii ka dambeeyay ay ku qaadeen jabhadda OLF haduu ahaa mid ku salaysan inay xukunka kala wareegaan oo aanay cid dambe haweysan, dagaalka ay kusoo qaadeen Ogadenya 1993kii wuxuu ahaa hadafkiisu inay baab’iyaan jabhadaha hubaysan ee Somalida Ogadenya ama dalka ka saaraan. Sidaa daraadeed istraatiijiyada dagaalka ay ku qaadeen Amxaarada iyo Oromada wuxuu ahaa Dila midkaan Is-dhiibin, halka istraatiijiyada dagaalka ay ku qaadeen shacabka Ogadenya uu ahaa Dila midkaan u cararin dhanka Somaliya. Arintaana waxay salka ku haysay quraafaadka la aaminsiiyay Xabashida, oo ah inay dadka dagan Ogadenya yihiin Somali ree guuraa xoola dhaqata ah oo usoo daaqsin tagay Itobiya, sidaa daraadeed ay tahay in dalka/gobolka Ogadenya laga saaro hadday codsadaan xuquuq ka badan daaqsin iyo daganaansho.
Maleesiyadii Ihaadhig (Wayaane) iyagoo sidaa ku cabaysan ayay ugu horeyn waxay dagaal ku qaadeen ciidamadii Itixaadka Ogadenya ka joogay oo ahaa urur aad u xoogan u hubaysan una habaysan. Dagaalo dhowr ah oo faraha lagaga gubtay ayay ku qaadeen fadhiisinadii Itixaadka, ugu dambayntiina way ku guulaysteen inay dalka ka saaraan oo xadka Somaliya lasii galaan. Iyagoo guushaa wata ayay dagaal ay ku talagaleen inuu muddo yar ku soo afjarmo kusoo qaadeen ciidankii yaraa ee ONLF, waxayna kaga bilaabeen inay qabtaan ama dilaan Gudoomiyii ONLF Sh. Ibraahim Cabdalla AUN.
Siday u dhaceen dagaaladay la galeen Itixaadka iyo qasaarihii soo kala gaadhay ciidamadii Ihaadig-ta iyo kuwii Itixaadka, waa mid aad looga dharagsan yahay, halkanna kagama bogan karno. Arinta u baahan in la fahmo waxaa weeye, sababta ay Ihaadhig-ta ugu guulaysteen inay dalka ka saaraan ciidankii Itixaadka ee ka xoog badnaa ONLF, tiro iyo tayaba, oy ugu guuldareysteen ilaa maantadan aan joogno inay dalka ka saaraan N/hurayaasha ONLF?
Qofka doonaya inuu arintaa ogaado, waxaa qasab ku ah inuu raadrac ku sameeyo asaaskii labada urur, ciqiidada ay ku dagaalgaleen iyo waliba xidhiidhka ay la lahaayeen bulshada ay ku dhex dagaalameen.
Waxaan arintaa wax ka weydiiyay odayaal goobjoog ka ahaa dhacdooyinkaa oo waliba qaarkood soo ahaa ciidankii Xooga Dalka Somaliya (SNA). Markaan soo ururiyo jawaabahoodii waxay ahayd sidan;
Ururka Itixaadka wuxuu ka mid ahaa urur weyne caalami ah oo la yidhaahdo Itixaadal Islaami. Waxaa laga maamulayay faraca Somalida magaalada Muqdisho, waxaana maalgalintiisa lahaa Sucuudiga. Wuxuu ahaa urur diini ah oo jihaad ku salaysan, asal ahaantiisana loogu talagalay in lagula dagaalamo shuuciyadda qabsaday meela ka mid ah caalamka islaamka. Dawladii Somaliya markay burburtay, oo dagaal sokeeye oo qabiil ku salaysan uu ka dhacay, ciidamadii Itixaadka oo xoog leh hasa ahaatee aan lahayn qabiil loo aaneeyo wuu garan waayay dhan uu kasoo safto dagaaladii ka qarxay Somaliya. Xaaladda oo sidaa ah ayaa waxaa cararay Mengistu, dalkii Itobiyana waxaa qabsatay jabhadii TPLF oo ku dhawaaqday inay qawmiyad walba is-maamuli karto, laba sano ka dibna ay aaya-hooda ka tashanayaan. Ururkii Itixaadka oo ku dhex milmi kari waayay dagaaladii sokeeye ee Somaliya ka socday ayaa usoo wareegay Ogadenya oo xafiisyo iyo saldhigyo loo sharciyeeyey ka furtay magaalooyinka waaweyn ee Ogadenya iyo Adis Ababa. Waxay furteen xafiisyo aad u habaysan oy ka socdaan dhaq-dhaqaaq diini ah iyo xeryo ciidan oy ka socdaan tababaro ciidan. Maadaama uu ahaa urur caalami ah, isla markaana ka tirsan faraca Somaliya, wuxuu u habaysnaa maamul ahaan iyo ciidamo ahaanba urur aan xidhiidh la lahayn shacabka Ogadenya, inkastoo madaxda loosoo magacaabay xafiisyadooda iyo maamulka ciidankoodaba ay ahaayeen dad la garanayo oo Somalida Ogadenya ah. Wuxuu ahaa urur haysta dhaqaale ka badan midka ay haysteen shacabka ay dhex yimaadeen oo aan haba yaraatee waxba uga baahnayn. Arintaasina waxay sii xoojisay inay kala fadhiyaan iyaga iyo shacabka oo aanay wax xidhiidh ah yeelan. Waxaa intaa dheereyd iyagoo (Itixaadka) la yimid fikrad ay yidhaahdeen waa cusboonayseen (Tajdiid diini ah), taasoy iskaga horyimid arima badan culumadii horey usii joogtay dalka, dadweynahana ay ku xidhnaayeen.
Waxaa la odhan karaa markii weerarka lagu soo qaaday fadhiisamadii Itixaadka, sida xeraday ku lahaayeen Suubaanbalal oo dagaal khadhaadhi uu ku dhex maray iyaga iyo maleesiyadii Ihaadhig-ta, waxay ugu muuqatay shacabkii Ogadenya inay yihiin laba ciidan oo dagaalamaya, oo aanay shaqa ku lahayn. Waana laga adkaaday ciidamadii Itixaadka oo taageero ka waayey shacabka.
Ilaa maantadan aan joogno, shacabka Ogadenya ma qirsana inuu ku khaldanaa inuusan taageerin Itixaadka, waxayna ku odhanayaan; ma ahayn urur danaha dadka iyo dalka Ogadenya loo asaasay. Itixaadkana ma qirsana inay sababta uu shacabka u taageeri waayay iyagu leeyihiin. Waxaase dhabowday ururkii lamagac baxay (Itixaadal Islaami fii-Ogaden) inuu ahaa farac ka tirsan Itixaadka Somaliya ka dib markay fuliyeen inay kasoo baxaan Ogadenya, kana qaybgalaan isla waqtigiiba dagaalkii ka qarxay Boosaaso ee u dhaxeeyay Itixaadka iyo ciidamadii Cabdulaahi Yusuf. Waa taariikh u baahan baadhitaan.
Muxuu kaga duwanaa ururka ONLF suu ugu sugnaado dalkiisa? La soco.